मेट्सको अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयरमा विद्यार्थीको उत्साहजनक सहभागिता (फोटो फिचर) – Saurahaonline.com
मेट्सको अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयरमा विद्यार्थीको उत्साहजनक सहभागिता (फोटो फिचर)
चितवन, १३ भदौ । विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि जान चाहने युवा विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गर्दै चितनवमा मेट्स एजुकेशन कन्सल्टेन्सीले ‘मेट्स अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर २०१८’ सम्पन्न गरेको छ ।
एजुकेशन फेयरमा विद्यार्थीहरुको उत्साहजनक सहभागिता रहेको मेट्स मेट्स एजुकेशन कन्सल्टेन्सी चितवन शाखाका प्रमुख प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए ।
मंगलबार आयोजना गरिएको एजुकेशन फेयरको मेट्स एजुकेशन ट्रेडिङ एज मेट्स इन्टरनेशन एजुकेशन एण्ड भिसा सर्भिसेसको प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश पाण्डेले रिवन काटेर उद्घाटन गरेका थिए ।
भरतपुर गार्डेन रिसोर्टमा आयोजना गरिएको एजुकेशन फेयरको उद्घाटन गर्दै पाण्डेले मेट्स एजुकेशनले दिने सेवा र सुविधाको बारेमा विद्यार्थीहरुलाई जानकारी गराए ।
उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेशमा जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई मेट्सले अष्ट्रेलियाका विभिन्न १६ वटा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरुमाफर्त परामर्श दिएको थियो ।
नेपालका मुख्य शहर काठमाडौँ ,पोखरा ,बुटवल र चितवनबाट सेवा दिदै आईरहेको छ ।
अनलाईनबाट प्रि–रजिष्ट्रेशन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई ब्रिटिश काउन्सीलको विशेष प्रतिनिधिबाट आईइएलटिएस परीक्षामा कसरी राम्रो अंक ल्याउने भन्ने बारे विशेष प्रशिक्षण सहभाीता जनाउन नारायणगढस्थित कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने समेत बताए ।
मेट्स नारायणगढ प्रमुख पौडेलका अनुसार फेयरमा जेम्सकुक युनिभर्सिटी, साउदनक्रस युनिभर्सिटी, फेडेरेशन युनिभर्सिटी, युनिभर्सिटी अफ सनसाईन कोष्ट, कपलान विजनेश स्कूल, द होटेल स्कूल सिड्नीरमेलवर्न, क्वीन्सफोर्ड कलेज, भाईब कलेज, अष्ट्रेलियन टेक्निकल कलेज, रेन्जफर्ड कलेज, अल्टिमेट इन्स्टिच्युट अफ अष्ट्रेलिया, अष्ट्रेलेसियन इन्टरनेशलन एकेडेमी, सिड्नी सिटी कलेज अफ म्यानेजमेण्ट, सिड्नी मेट्रो कलेज, न्यू इरा इन्स्टिच्युटलगायत विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।
एजुकेशन फेयरमा सहभागीहरुलाई वन टु वन काउन्सेलिङ, इभ्यालुसन एण्ड प्रोसेसिङ गाईडेन्स, आईइएलटिएस रजिष्ट्रेशन एण्ड टेष्ट डेट अभाइलबविलिटी, एट्रयाक्सनरएन्गेजमेण्ट एण्ड इन्टरटेनमेण्ट दिइएको छ ।
फेयरमा छात्रवृत्ति, भर्ना प्रक्रिया, अष्ट्रेलियाको शिक्षा, त्यहाँ अध्ययन गर्दा पाउने अवसरको बारेमा प्रत्यक्ष रुपमा विद्यार्थी र अभिभावकहरुले जानकारी गराईएको पौडेलले बताए ।
फेयरमा विद्यार्थीहरुले आफूले पढने इच्छा गरेको विषयमा छात्रवृत्ति लगायतका कुराहरु आफै बुझेर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएकाले उनीहरुले भोलि पढन गइसकेपछि के हुने हो ? कस्तो हुने हो ? जस्ता अन्योलता नरहने उनको भनाई छ । शहिदचोकमा रहेको मेट्स एजुकेशनले नेपाली विद्यार्थीहलाई सही परामर्श दिएर अष्ट्रेलिया पठाउने गरेको छ ।
नेपाल एसबिआई बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र सानिमा बैंकका प्रतिनिधिहरुले शैक्षिक कर्जा एवं बैंकिङ प्रोसेसको लागि विद्यार्थीहरुलाई सहजीकरण गरेका थिए ।